About - Somalian || Deportivo-La-Coruna.com - The International Depor Website and Official Fanclub
About - Somalian
DEPORTIVO-LA-CORUNA.COM - KU SAABSAN WEBKA
Wax walba ka hor cinaankan (Webkaan) ma ahan mid ofishaal ah oo ey leedahay kooxda Real Club Deportivo La Coruna. Midka khaaska ah oo ey leedahay kooxdu waa mid ku qoran luuqada Spanishka, waxaadna ka gali kartaan "halkaan".
Waxaa webkaan fikradiisa lahaa Difoose Holandeeys ah oo magiciisa la dhoho Leon, asaga oo sanadkii 2000 bilaabey in uu sameeyo Webka Caalamiga ah ee kooxda Deportivo, Wuxuu rabey in uu baro kooxda Deportivo dadka aan aqoonin luuqada Isbaanishka ee ku nool caalamka asaga oo adeegsadey Internetka, Wuxuu isku deyey in uu dadka u soo bandhigo waxyaalo badan oo ey ka mid yihiin Wararka kooxda, Horyaalada, Warbixino ku saabsan Kooxda, Laacibiinta, iyo waliba Goolasha ugu khatarsan ey Deportivo dhalisey iyo Wallpapers.
Waxay u ahayd guul sare qeyb kala duwan oo dunida dacalkeeda ku nool kuwaas oo daneynaayey iney ogaadaan kooxda Deportivo, ayagoo heley web ku qoran luuqada Ingariiska.
Abriil 2002dii, Leon wuxuu go'aansadey in uu helo dad badan oo kala shaqeeya webka si uu wax badan uga bedelo si ey u badato Warbixinada iyo Qeybaha kala duwan ee websiteka, ayaga oo u sameeyey webka Qaab cusub, Qaabka Cusub ee webka ayaa waxaa uu bilowdey bishii May 2002dii, asagoo hir galey bishii Deseebmer ee 2002da.
Qeexid - Waxa aan qabano iyo wax aanan qabanin
Webkan Caalamiga ah ee Deportivo waa mid ey sameeyeen Difooseyaal una sameeyeen difooseyaasha kale ee Deportivo taageera. Anagoo ah Web eysan lahayn kooxdu, waxaan qeexeynaa inaan Xiriir toos ah la lahayn Laacibiinta iyo Kooxdaba, Mana ku qaraabano magaca kooxda, Mana Matalno kooxda.
Marka Hadii aad rabtid inaad laacib cusub ama tahay mid raba in uu u ciyaaro kooxda Deportivo, fadlan kala xiriir kooxda Deportivo Webkooda "Halkaan".
Ma kuu xejin karno Tigidka Ciyaarta, mana Aqbalno Codsiyada dadka raba iney tigid helaan, Sidoo kale ma dirno waxyaalo bilaash ah sida Shaarka kooxda, Sawirada, Saxiixa Ciyaartoyda, I.W.M, caqligaada adeegso adoo garan kara waxa aan qabano iyo waxa kaleetoba.
Shaqada Deportivo-La-Coruna.com Waa in aan u soo gudbino xubneheena Wararka iyo Sawirada kooxda anagoo ka soo qaadaneyna Xogaha Internetka ee Spanishka ah ka dibna u turjumna Ingariis, waa meel aad ka heli kartid kutiri-kuteenta ku saabsan deportivo iyo wararkeedaba oo Ingariis ah, Mar labaad ma matalno kooxda laakiin wixii fikradaada ah oo ku saabsan Wararka waan soo dhoweyneynaa.
DEPORTIVO-LA-CORUNA.COM (DIFOOSEYAASHA CAALAMIGA AH)
Laga soo bilaabo Diseember 2004tii ayaa webkaani isku bedeley Web Ofishaal
Deportivo-La-Coruna.com waa Web ey leeyihiin Difooseyaal Ofishaal ah (pe?±a), oo ley Xubno fir-fircoon oo ka qeyb qaata doodaha furan ee kooxdooda kuna dooda (Forum). Webkan Deportivo La Coruna waa kii ugu horeeyey oo Caalami ah, isla markaasna ah Ofishaal oo waliba kulmiya Difooseyaal aan Xuduud lahayn, una diiwaan gashan kooxda Deportivo.
Ka Mid noqoshada Difooseyaasha Deportivo waxaa ey faa'iido ahaan leedahay : Qeyb gooni u ah Difooseyaasha (Forum khaas ah), In aad la kulmi kartid difooseyaal kale oo aad isku meel joogtaan/joogin, Waxaa kale oo awood u yeelan kartaa inaad gadatid tigidka ciyaaraha deportivo, Inaad ka qeyb gali kartid Shirarka Difooseyaasha ee ka dhacay La Caruna, Waxaad kale oo u codeyn kartaa Laacibka ugu fiican deportivo Sanad walba, iyo Waxyaale kale oo Badan, Badan.
Qeybta Difooseyaashu waa meel ey ku kulmaan Xubnaha Ofishaalka ah, kuwaas oo mar walba isla wadaaga Waqitayada fiican ee soo mara kooxdooda, iyo waliba waqtiyada xun xun ee soo mara kooxda, ayagoo isku deya in ey wax walba ka dhigaan wax u fiican kooxdooda.
Sidee ku noqon kartaa Xubin ?
Difooseyaasheena waa dad isku yaqaana, taas macneheedu waa hadii aan lagu aqoonin kama mid noqon kartid difooseyaasha ofishaalka ah, Laakiin waxaan kugu baran karnaa oo nagaga mid noqon kartaa hadba sidaad uga qeyb qaadatid (forumka), adoo isticmaalaaya Doodo caqli iyo Isboorti ku saabsan, Adoo tusaya dadka kale sida aad u taageerto kooxda, iyo adigoo in badan ka qeyb qaata doodaha webka (Forums), intaas ka dib ayaa waxaan ku ogeysiin doonnaa inaad ka mid noqon kartid Xubneheena, Ama ayadoo uu kuu dalbo qof ka mid ah xubnaha inaad ku soo biirtid, ka dibna laguu codeeyo.